How to bypass Login ( Register လုပ်ခိုင်းသော ဖိုရမ်တို့ မှာ Register မလုပ်ပဲ Bypass နည်းဖြင့် အလွယ် Login ဝင်နည်း ) | Myanmar Black Hacking
1 How to bypass Login ( Register လုပ်ခိုင်းသော ဖိုရမ်တို့ မှာ Register မလုပ်ပဲ Bypass နည်းဖြင့် အလွယ် Login ဝင်နည်း )
Google ဟာ Webpages တိုင်းရဲ့ image တွေကို သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် database မှာ Cache အနေနဲ့သိမ်းထားပါတယ်.. အဲ့ဒီ Google cache link ကိုသုံးပြီး ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်..
ကျနော်တို့ t ဥပမာဗျာ http://www.nyamintharx.net/ ညမင်းသားဆိုဒ်ရဲ့ ဖိုရမ် webpage တစ်ခု ကို register မလုပ်ပဲဝင်ကြည့်မယ်နော်
BugMeNot firefox addon
===============Bugmenot addon ဟာ bypass registration အတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ addon ပါ။ Bugmenot မှာ ဆိုက်ဒ် တော်တော်များများရဲ့ login information များကိုသိမ်းဆည်းထားပါတယ်..
Install bugmenot ကို Add-ons မှာ bugmenot ရှာပြီး Install - Accept and Install လုပ်ပါ
Bugmenot ကိုသွင်းပြီးပြီဆိုပါက သင် register လုပ်ရမယ့် forum ရဲ့ login မှာ Right click နှိပ်ပြီး “Login with BugMeNot” ကိုနှိပ်ကာ ခဏစောင့်လိုက်ပြီးရင် သူ့ အလိုလို user name - password ကို Auto ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်.
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကောင့်အသစ် Register လုပ်စရာမလိုတော့ပဲ ညမင်းသားဆိုဒ်ကို သူများအကောင့်ကနေဝင်ရောက် ယွကြောထကြည့်ရှုရပြီတို့ ဘာတို့ ပေါ့ ခ်ခ် ...
UserAngent Switcher firefox addon
ဒီ Firefox addon ကတော့Webmasters တွေ သူတို့ရဲ့ wesites တွေဟာ google နှင့် တစ်ခြား search engines တွေနဲ့ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်လား လို့ စစ်ဆေးရာတွင်သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ကိုသုံးပြီး ကျော်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်..
Install UserAngent Switcher
သွင်းပြီးရင် Tools- Default UserAgent- UserAgentSwitcher - Options – New – New User Agent
နှိပ် ပြီး အောက်က အတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..
User agent မှာ အသစ်လုပ်ထားတဲ့ Agent သုံးပြီး Forums တွေရဲ့ pages တွေ ကြည့်လို့ရပါပြီ...
Ref - Google And YouTube
စိုးပြည့် ကျော် said...
Jan 4, 2016, 10:55:00 PM